Global Voices teny Malagasy » Mbola any am-ponja ilay mpanao gazety Nizeriana Omoyele Sowore noho ny fiampangana namboamboarina tamin’ny famadihana tanindrazana sy ny fanevatevana ny filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2019 3:09 GMT 1	 · Mpanoratra Nwachukwu Egbunike Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Afrika Mainty, Nizeria, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Omoyele Sowore. Pikantsary tao amin'ny Democracy Now .
Nanamarika ny fihetsiketsehana #RevolisionaAnkehitriny ho toy ny fikasana haka an-keriny ny fitondrana ny DSS. Tamin'ny 8 Aogositra, neken'ny fitsarana tao Abuja, izay notarihan'ny Mpitsara Taiwo Taiwo ny fangatahan'ny DSS hitazona an'i Sowore any am-ponja mandritra ny 45 andro  mandritra ny fanaovan'izy ireo fanadihadiana.
Tamin'ny 23 Aogositra, mpiaro ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety miisa 48, anisan'izany ny ekipan'ny Global Voices any Afrika Atsimon'i Sahara no nanao fangatahana  tany amin'ny Firenena Mikambana (ONU) sy ny Vaomiera Afrikana misahana ny zon'Olombelona sy ny Vahoaka, mba hirotsaka an-tsehatra haingana amin'ny fiantohana ny famotsorana avy hatrany an'i Sowere. Nilaza ihany koa izy ireo fa fanitsakitsahana goavana ny zon'olombelona ananan'i Sowore sady fandrahonana ny fahalalahan'ny gazety any Nizeria ny fisamborana azy.
Araka ny voalazan'ny gazety an-tserasera CableNG dia voampanga  ho namadika tanindrazana izy tamin'ny “fikarakarana ny fanentanana revolisiona tamin'ny 5 Septambra 2019, izay nikendry ny hanalana ny filoham-pirenena sy ny lehiben'ny komandin'ny Tafika Mitam-piadiana ao amin'ny Repoblika Federaly ao Nizeria”. Miatrika fiampangana famotsiam-bola tamin'ny famindrana ny “vola mitentina 19.975 dolara avy amin'ny kaontiny UBA ao amin'ny City Bank, New York, mankany amin'ny Orina Mpanasoa Sahara Reporters Media ” izy. Sowore no mpanao matoandahatsoratra ho an'ny Sahara Reporters , gazety an-tserasera mpanao fanadihadiana izay naoriny tamin'ny taona 2006. Voampanga  tamin'ny fandrahonana an-tserasera ihany koa izy noho ny “fanevatevana, fandrafiana, fankahalana ary fanirian-dratsy manoloana ny filohan'ny Repoblika Federaly ao Nizeria.”
Tamin'ny 24 Septambra, io fitsarana ao Abuja io ihany izay notarihin'ny Mpitsra Taiwo Taiwo no nanome baiko  ny famotsorana avy hatrany an'i Sowore ao amin'ny fonjan'ny DSS. Nilaza ny famotsorana avy hatrany an'i Sowore ny mpisolovavany, Femi Falana satria tapitra tamin'ny 21 Septambra ny didy izay manome fahefana ny DSS hitazona ny olony mandritra ny 45 andro. Saingy nilaza anefa ny Lehiben'ny Fampanoavana, G.O. Agbadua fa ara-dalàna ny fitazonana an'i Sowore any am-ponja satria nisy ny fiampangana azy tamin'ny 20 Septambra.
Na dia izany aza dia notsikerain'i Falana ny tenin'i Agbadua tamin'ny filazana fa  “tsy tokony ho tanana ny olom-pirenena iray mialoha ny fiampangana azy.” Nandidy ny famotsorana ilay voafonja noho izany ny Mpitsara Taiwo.
Tsy narahin'ny  DSS anefa izany baiko izany satria tsy naharay ny dika mitovy tamin'ity didim-pitsarana ity izy ireo. Nametraka fanamarihana momba ny fanitsakitsahan'ny DSS ny didim-pitsarana  noho izany ireo mpisolovava an'i Sowore .
VAKIO BEBE KOKOA: https://t.co/dFC5LJSGZr  pic.twitter.com/5SRb2hNwz9 
Tamin'ny 30 Septambra, mbola niakatra fitsarana indray  i Sowore tamin'ny filazana fa firaisana tsikombakomba tamin'ny famadihana fanjakana , fandrahonana an-tserasera ary ny famotsiam-bola. Tsy niaiky ny helony  tamin'ny fiampangana azy izy.
VAKIO BEBE KOKOA: https://t.co/2spZXTzAsb  pic.twitter.com/exgcDXOcAc 
Niantso ny governemanta mba hisintona ny fiampangana hanenjehana  an'ilay “mpanao gazety fanta-daza eran'izao tontolo izao” sy mba “hanafaka azy tsy misy hatak'andro ilay mpahay toekarena Amerikana Phelps Edmund niaraka tamin'ny akademika sy mpikatroka miisa 72″
Tahaka izany ihany koa, nanavao ny antson'izy ireo  tany amin'ny Firenena Mikambana sy ny Vondrona Afrikana mba hanery ny governemanta Nizeriana hamoaka an'i Sowore ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona miisa 50, anisan'izany ny Global Voices any Afrika Atsimon'i Sahara (GVSSA).
Tao amin'ny sombin-kevitra iray navoaka tao amin'ny Premium Times ny 23 Septambra, namintina ny fihetseham-pon'ny olona maro  momba ny asan'i Sowore ilay mpanao gazety Nizeriana Fisayo Soyombo:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/31/144226/
 45 andro: https://affairstv.com/2019/08/08/breaking-court-grants-dss-permission-to-detain-sowore-for-45-days/
 nanao fangatahana: https://globalvoices.org/wp-content/uploads/2019/08/Urgent-Appeal-Omoyele-Sowore-Nigeria_for-circulation.pdf
 nanome baiko: https://www.channelstv.com/2019/09/24/breaking-court-orders-release-of-sowore-from-dss-custody/
 tamin'ny filazana fa: https://guardian.ng/news/court-rejects-dss-request-orders-release-of-sowore/
 Tsy narahin'ny: https://www.pulse.ng/news/local/dss-explains-why-sowore-is-still-in-detention/t0fcpx1
 fanitsakitsahan'ny DSS ny didim-pitsarana: https://punchng.com/sowore-wants-dss-boss-jailed-for-flouting-release-order/
 niakatra fitsarana indray: https://www.icirnigeria.org/again-court-remands-sowore-in-dss-custody/
 niaiky ny helony: https://www.reuters.com/article/us-nigeria-politics/nigerian-activist-sowore-pleads-not-guilty-to-treason-charges-idUSKBN1WF16F
 nanavao ny antson'izy ireo: https://globalvoices.org/wp-content/uploads/2019/10/20190926-Urgent-Appeal-Omoyele-Sowore-Nigeria-UPDATE-FINAL.pdf
 fihetseham-pon'ny olona maro: https://opinion.premiumtimesng.com/2019/09/23/i-wanted-to-insult-the-president-but-i-didnt-want-to-go-to-jail-by-fisayo-soyombo/